चुनावी परिणाम र पार्टी अध्यक्ष ओलीबारे के भनेका थिए घनश्याम भूसालले? - Nepal Readers
Home » चुनावी परिणाम र पार्टी अध्यक्ष ओलीबारे के भनेका थिए घनश्याम भूसालले?
कमरेड ओलीकै गीत, ओलीकै फोटो र जिल्ला तथा पालिकाका कार्यक्रम पनि ओलीले एक्लै उद्घाटन गर्नु यो ‘वान म्यान सो’ थियो। इतिहासमा हामीले कति क्षति व्यहोर्नुपर्यो, त्यसको अर्को हिसाब होला।
एमाले अनुशासन आयोगले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूसाललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले भूसाललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो। जेठ ८ गते लिइएको उक्त अन्तरवार्तामा भूसालले के भनेका थिए, जसले पार्टीको अनुशासन आयोगलाई भूसाललाई कारवाही गर्ने निस्कर्षमा पुर्‍यायो? भूसालको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश।
“चुनाव हामीले भनेको जस्तो भएन। सामान्यत : हामी पार्टी विभाजनदेखि नै गलत बाटोमा थियौँ। संसद विघटन गलत थियो। तर, यो गलत थियो भनेर एमालेले भनेन। त्यतिमात्रै होइन, संसद विघटन गलत थियो भन्ने कुरा त यो संविधान रहेसम्मका लागि स्थापित भइसक्यो।
हामी त्यो पार्टी हौँ, जसले त्यत्रो सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो, त्यो एकता वामपन्थी आन्दोलनका लागि भयंकर ठूलो अवसर ढोका खोलेको घटना थियो। अदालतले हामीलाई नाजायज रुपले विभाजित गर्दा समेत दिपावली गर्ने हाम्रो मति थियो। यो हामी कसरी गलत बाटो हिँड्दैथियौँ भन्ने कुरा हो।
विभाजनपछिको एमालेमा ओलीकै बहुमत थियो, केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै पर्याप्त ठूलो अल्पमतलाई बाहिर राखेर आफ्नो गुटको बैठक बसेर त्यो बैठक एमालेको हो भनेर अरुलाई पाखा लगाउने काम पनि भयो।
त्यही क्रिया/प्रतिक्रियामा गएर हामीले फेरि संसद विघटन गर्‍यौं। दश बुँदे गर्यौँ, त्यसमा म आफैं छु। डेढ/दुई महिना हामीले कसैलाई थाहा नदिइकन हाम्रो लेभलमा छलफल गर्यौँ। धेरै विश्वासका साथ कुराकानी गर्यौँ। जब दश बुँदे सहमति भयो, माथि बसेका मान्छेबाट खिसिट्युरी गरियो।
कार्यकारण सम्बन्धको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यी यस्ता कारण हुन्, जसले हामीलाई यी परिणाम दिए। पार्टीको आन्तरिक सञ्चालनमा पनि हामीले भयंकर गल्ति गर्दैथियौँ। म सौराहा काण्ड भन्छु। जुन परम्पराबाट एमाले बनेको थियो, त्यस विपरीत गएर एकजनालाई सर्वाधिकार दिने, उसले लिस्ट पढ्ने, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने, त्यसलाई महाधिवेशन भन्नुपर्ने, सार्वभौमसत्तासम्पन्न प्रतिनिधि भन्नुपर्ने, चुनावको नाटक मञ्चन हुने अनि त्यसमा अन्तिममा फलानो–फलानोलाई भोट नदेऊ भनेर अध्यक्षले लिस्ट जारी गर्ने। जिल्ला अधिवेशनहरू पनि जसरी भए, उम्मेद्वार जसरी तय भए यी सबै घटनालाई हेर्दा संक्षेपमा के भन्छु भने कमरेड ओलीको प्रयोग असफल भयो भन्ने कुरा अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट (शतप्रतिशत) देखिएको छ।
दुई वटा बाटो छन्, एउटाः परम्परागत रुपमा हाम्रो सोच, सामाजिक संस्था, संगठनहरू र समाजमा एउटा महान् आत्मा हुन्छ। उ सचेत, सक्रिय, सर्वव्यापी र सर्वदर्शी हुन्छ। प्रकृति उसका आकांक्षाले जन्मिन्छ, प्रकृति केही होइन, उसको छायाँ मात्रै हो, यो एउटा सोचाईको प्रक्रिया हो, म सत्य हुँ र अरु सबै मिथ्या हो भन्ने एउटा तरिका हो।
अर्कोः लोकतन्त्रमा सचेत, सक्रिय, सहभागी र महान् जनता हुन्छन्। जनताको महान् कर्मले एउटा महान् नेता जन्माउँछ। अर्को बाटो यो हो। तर हामी अघिल्लो बाटो गयौँ। कमरेड ओलीसँग सबै समाधान छ, उहाँसँग सबै ज्ञान छ, उहाँ सर्वशक्ति सम्पन्न हुनुन्छ भन्ने बाटोतिर गयौँ।
एउटा खास यस्तो बेला हुन्छ, जतिबेला परिणामहरू देखिन्छन्। त्यतिखेर नीति र नेतृत्व छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दा नेकपा एमाले भनेको ओली र ओली भनेको नेकपा एमाले दुवै असफल भएका हुन्, समग्रतामा। तर, फेरि यसलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने यत्रो गलत कामहरू हामी गर्दै थियौँ, नेतृत्वको हिसाबले हामी त अझ डरलाग्दो अवस्थामा थियौँ। केन्द्रीय कमिटीमा जे रिपोर्ट भयो, त्यो रिपोर्टका हिसाबले १६० वरिपरि मात्रै (स्थानीय तह निर्वाचनमा) आउने हो कि भन्ने थियो। जे होस् पछि बन्यो।यस हिसाबले हेर्दा नेतृत्वले अझ बर्बाद पार्न खोजेको थियो, तर जनताले इतिहासको हाम्रो मूल्यांकन गरे। यो वर्तमान मूल्यांकन होइन,आज हामीले जुन मत प्राप्त गरेका छौँ, त्यो पार्टी चलाउने, चुनाव चलाउने शैलीको भोट होइन। एमालेले इतिहासमा गरेको, लडेको, कार्यकर्ताले रगत–पसिना बगाएर गरेको योगदानको मत हो।
आज हामीले जसरी गर्यौँ, जसरी हिँड्यौँ, यस हिसाबले अझै बर्बाद हुन सक्थ्यो। यही तरिका हो भने हामी भिरको नजिक–नजिक जाँदै छौँ । हामी एउटा कान्लाबाट खस्यौँ, धेरै कान्लाबाट खसेर भिरको नजिक पुगेका छौँ।
हामी सांगठनिक रुपले पहिलेदेखि अन्यौलग्रस्त थियौँ। यो त्यसको परिणाम हो। आफ्नो सत्ताका लागि, आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि, लाभ र पदका लागि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा नेताहरूले नै नाङ्गो रुपले कार्यकर्तालाई र कार्यकतामार्फत जनतालाई सिकाएका थियौँ। त्यो अन्तरघात हामीले सिकाएको हो। एउटा आँखाले हेर्नुहुन्छ भने त्यो विद्रोह हो।
हामीले कमिटी, पार्टी र जनतालाई हेप्यौँ, हामीले धेरै हेप्ने काम गर्यौँ। यसको व्याख्या होला। त्यसैले उनीहरूको आँखाले हेर्दा त्यो विद्रोह हो। पार्टीको परम्परा, सिद्धान्त र नैतिकताको हिसाबले भन्ने हो भने त्यो अन्तर्घात हो। तर, डरलाग्दो कुरा, यदि यसको सही मूल्यांकन गर्न सकेनौँ भने कोत पर्व हुने हो कि!
यदि नेकपा एमाले राज्यलक्ष्मीले गगनसिंहको हत्यारा खोज्ने काम गरेजस्तै कोत पर्व गर्नेतिरको बाटो लिन्छ कि समीक्षा गर्ने र जिम्मेवारी लिने बाटो लिन्छ। कमरेड ओलीले यो अन्तिम बेलामा पनि बुद्धि पुर्याउनु भएन भने, उहाँले यसलाई कोतपर्वतिर लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो भने हामी भयंकर ठूलो संकटमा छौँ।
यो चुनावभन्दा अगाडि नै मैले भनेको थिएँ, हाम्रो दुरबुद्धिले जे कृत्य गर्यौँ त्यो नगरिदिएको भए, अन्तिममा पनि यदि थोरै सद्बुद्धि पलाएको भए, हामी वाम गलबन्धन गरेर गएको भए हामी ६०० स्थानीय तह वरिपरि जितेर अगाडि बढ्थ्यौँ।
अघि मैले कोतपर्वको कुरा गरेको थिएँ, ओली कमरेडले यसलाई निकास दिने चान्स छ। त्यो भनेको यसको सप्पै जिम्मा उहाँले लिने। ‘सप्पै म हुँ अरु केही होइन’ भन्ने जुन प्रयोग थियो, ठिकै छ, यो एउटा प्रयोग भयो, उहाँले यसलाई यसैगरी लिनुभयो भने उहाँको पनि प्रतिष्ठा थोरधेर कायम रहनेगरी यसको सेटलमेन्ट हुने ठाउँ छ।
ओली कमरेडसँग विलक्षण प्रतिभा छन्, असाधारण प्रतिभा छन्। व्यवहारिक राजनीतिको हिसाबले हेर्ने हो भने मान्छु। तर, समस्या के छ भने उहाँँको त्यो ‘म’ को आकार यति ठूलो छ कि ती सबै प्रतिभाहरू निस्प्रभावी हुन्छन्। कमरेड ओलीले नै यी कुराको जिम्मेवारी लिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँको यो ‘म’ सिद्धान्तको प्रयोग असफल भयो।
ओलीले ‘म अब कोत पर्वको बाटो रोज्दिनँ, बरु माधव नेपालको बाटो रोज्छु’ भनेर लाग्नुपर्यो। २०६४ सालमा हामी हार्यौँ, माधव नेपालले राजीनामा दिनुभयो। म आज कमरेड ओलीलाई राजीनामा गर्नुस् भन्दिनँ, पहिला त उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्यो।
मैले माधव कमरेडको राजीनामाले पार्टी बचाउन ठूलो योगदान गर्यो भन्ने अर्थमा यो कुरा गरेको हुँ। के गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीमा सामूहिक रुपले जाँदा कमरेड ओलीसँगकै सरसल्लाहमा पार्टीलाई कसरी लैजादा ठीक हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ। हाम्रो वर्तमान बिग्रियो, तर भविस्य बाँकी छ। अझै पनि हामी भविस्यको ख्याल गरौँ।
महाकाली पछि इन्डिया संसदलाई हान्ने, माओवादी जनयुद्धका नाममा हान्ने, राजा आफ्नो सत्ता गुमेका नाममा संसदलाई हान्ने, आज पनि संसदमाथिको अतिक्रमण। संसद हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग समेत जोडिएको कुरा हो। यस अर्थमा म त्यो कुरामा सम्झौता गर्दिनँ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। फेरि पनि संसदमाथि आक्रमण, त्यसमार्फत अस्थिरता तर्फ लैजाने भूराजनीतिक र भागभित्री शक्तिहरू, त्यसलाई म रोक्न त सक्दिनँ तर मैले गर्न सक्ने प्रतिक्रिया म गर्न सक्छु।
एउटा राजनीतिक पार्टी विचारधारात्मक रुपले प्रशिक्षित नभएपछि मान्छेका निजी हितहरू अगाडि आउँछन् र त्यो अनन्त लडाईँको एउटा रणमैदान बन्छ। वैचारिक प्रशिक्षणका हिसाबले २०७१ साल पछाडिहामीले अहिलेसम्म वैचारिक भन्न मिल्ने, वैचारिक प्रशिक्षण, वैचारिक छलफल र वैचारिक विमर्शका हिसाबले एउटा पनि काम गरेको छैन।”
हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ताको भिडियो –